I-Alumina ye-eyelet eyelet guide China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Textile Ceramics > I-General Textile Ceramics > I-Alumina ye-eyelet eyelet guide
Material: Metal, Alumina, Zirconia, Titania
I-Ceramic eyelet guide ngokuvamile iyenziwe ngamaphesenti angu-95, 99% alumina noma i-titanium oxide ceramics. Siyakwazi ukuhlinzeka ngezinhlobonhlobo eziningi ze-eyelet guide kumbala ohlukile, njengehlobo olulodwa lwe-flanged, izinhlobo ezimbili ze-flanged, uhlobo oluvuthayo, uhlobo olufakiwe.
Ukuze unciphise ukushayisana komhlahlandlela wocingo , imbobo yangaphakathi ihlale iphosiwe, izinga le-polish lingaba ngu-Ra0.3 ~ 0.4, noma kungcono.
Njengamanje, sinamaso amakhulu e-ceramic eyelet ahlukahlukene nosayizi ohlukile. Kulula ukuthola okufanelekayo imishini yakho. Ngaphandle kwalokho, sisekela uhlelo lokubamba iqhaza ngomdwebo wamakhasimende noma amasampuli.
I-Ceramic Seal Disc yama-Multi-function Showers